Imibuzo Evame Ukubuzwa | ISongz Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
1. Ngaphandle kwemikhiqizo efakwe ohlwini kuwebhusayithi, ingabe ikhona eminye imikhiqizo yokubandisa umoya etholakala kwi-SONGZ?
Yebo, sinemikhiqizo etholakalayo futhi yeloli yokupholisa umoya kanye negesi yokupaka epholile, sicela uxhumane ne-sales@shsongz.com ukuthola eminye imininingwane.
2. I-SONGZ iqale nini i-R & D ye-air bus air conditioner?
Saqala i-R & D ngaphambi kuka-2009, kwathi ngo-2010 unyaka wokuqala sanikezela ngamayunithi angama-3250 emakethe. Ngemuva kwalokho, inani lokuthengisa likhula unyaka nonyaka futhi lifinyelela phezulu kuma-28737 ngo-2019.
3. Yini impahla ye-SMC?
I-SMC (Sheet Mounding Compound) impahla ehlanganisiwe ibunjiwe ngokushisa okuphezulu ekubumbeni kanye, ngamandla aphakeme womshini, ukukhanya kwesisindo, ukumelana nokugqwala, impilo ende yokusebenza, amandla aphezulu okuvikela, ukumelana ne-arc, ukuvimbela ilangabi, ukusebenza kahle kokufaka uphawu, nomkhiqizo oguqukayo idizayini, kulula ukukala ukukhiqizwa, Futhi inezinzuzo zokuphepha nobuhle, ngomsebenzi wokuvikela isimo sezulu wonke, ongahlangabezana nezidingo zezindawo ezahlukahlukene ezinzima nezindawo kumaphrojekthi wobunjiniyela bangaphandle.
I-SONGZ yamukela okokusebenza kwe-SMC ekhaveni ye-conditioner yomoya webhasi ochungechungeni lwe-SZR ne-SZQ, ukuthatha indawo yesembozo sengilazi ye-fiber.
Ukuqhathanisa phakathi kwekhava lengilazi le-SMC & Fibre
Uhlobo lwenqubo Inqubo yokwenza izinto eziyinhlanganisela ikakhulukazi ngokusebenza ngezandla ngaphansi kokushisa okuphezulu nokucindezela. Le nqubo ilula, ukusebenza kulula, akukho mishini yobuchwepheshe edingekayo, kepha ikhwalithi yezingxenye kunzima ukuyiqinisekisa Ukucindezela ukubumba kungukusebenza kokufaka i-SMC sheet-like molding compound emgodini wesikhunta ekushiseni okuthile kokubumba, bese kuvalwa isikhunta ukucindezela nokubumba nokuqinisa. Ukuminyanisa ukubumba kungasetshenziselwa amapulasitiki we-thermosetting nama-thermoplastics.
Ubushelelezi bomkhiqizo womkhiqizo Smooth ngakolunye uhlangothi, futhi ikhwalithi incike ezingeni lomsebenzi wesisebenzi Smooth ezinhlangothini zombili, ikhwalithi enhle
Ukuguqulwa komkhiqizo Umkhiqizo unesamba esikhulu sokusonteka futhi akulula ukusilawula. Ithinteka kakhulu ngokushisa nokusebenza mathupha Ukusonteka komkhiqizo kuncane, futhi kunobudlelwano obuncane nezinga lokushisa nezinga labasebenzi
UBubble Ngenxa yenqubo yokubumba, ukushuba kunqunywa inani lezendlalelo ezinamanzi, izingqimba akulula ukungena kuzo, amabhamuza akulula ukuwasusa, futhi amagwebu kulula ukukhiqizwa Ubukhulu bunqunywa inani lokudla nesikhunta. Ngenxa yokushisa okuphezulu nokubumba kwengcindezi ephezulu, akulula ukukhiqiza amabhamuza
Ukuqhekeka 1. Ngenxa yenani elikhulu lokukhubazeka komkhiqizo, akulula ukulawula, futhi akulula ukufaka ngesikhathi sokufakwa.2. Ukushisa okuphansi kwelapha ukukhiqizwa okuhamba kancane, okuholela ekuqhekekeni okuncane ebusweni bomkhiqizo
3. Ngenxa yokuqina okuncane komkhiqizo, ukuqina kukhulu kunalokho kokubumba, futhi upende ongaphezulu uthambekele kulayini omuhle womkhiqizo
Umkhiqizo uzinzile, ngaphandle uma amandla endawo enganele, ukugxila kwengcindezi kuholela ekuqhekekeni
Umphumela Utshalomali lokuqala luphansi, okukhiphayo kuphansi, futhi akulifanele amaqoqo. Okukhiphayo kuthinteka kakhulu ngenani labasebenzi kanye nenani lesikhunta (3-4 izingcezu / isikhunta / amahora angu-8) Ukutshalwa kwezimali kokuqala okukhulu, okufanele ukukhiqizwa ngobuningi (izingcezu eziyi-180-200 / isikhunta / amahora angama-24)
4. Yini impahla ye-LFT?
I-LFT yaziwa nangokuthi yi-fiber-reinforced thermoplastic ende noma ejwayele ukubizwa ngokuthi yi-fiber-reinforced thermoplastic composite material, eyakhiwa kakhulu yi-PP ne-fiber plus additives. Ukusetshenziswa kwezithasiselo ezahlukahlukene kungashintsha futhi kuthinte izici zohlelo lokusebenza zomshini nezikhethekile zomkhiqizo. Ubude be-fiber ngokuvamile bukhulu kune-2mm. Ubuchwepheshe obucutshungulwayo obukhona manje sebungakwazi ukugcina ubude befayibha ku-LFT ngaphezu kwe-5mm. Ukusebenzisa imicu ehlukene yezinhlaka ezahlukahlukene kungafinyelela imiphumela engcono. Ngokuya ngokusetshenziswa kokuphela, umkhiqizo ophelile ungaba mude noma umise okomugqa, ububanzi bepuleti, noma ibha, esetshenziselwa ngqo ukufaka esikhundleni semikhiqizo ye-thermoset.
5.Izinzuzo ze-LFT uma ziqhathaniswa nezinhlanganisela ezimfushane eziqinisiwe ze-thermoplastic
Ubude obude be-fiber buthuthukisa kakhulu izakhiwo zemikhiqizo yomkhiqizo.
Ukuqina okucacile okuphezulu namandla athile, ukumelana okuhle komthelela, ikakhulukazi okufanele kusetshenziswe izingxenye zezimoto.
Ukumelana okunyukayo kuyathuthukiswa. Ukuzinza kobukhulu kuhle. Futhi ngokunemba okwakha izingxenye kuphakeme.
Ukumelana nokukhathala okuhle kakhulu.
It has ukuzinza kangcono lokushisa kanye imvelo ezinomswakama.
Ngesikhathi senqubo yokubumba, imicu ingahamba kancane ekubunjweni, futhi umonakalo we-fiber mncane.
Izinto ze-LFT zamukelwe ku-air conditioning yochungechunge lwe-SZR, uchungechunge lwe-SZQ, kanye nenguqulo yomzimba emincane yochungechunge lwe-SZG.